Site na: KongoLisolona: Septemba 29, 2018 00: 30 Enweghị asịsa
Ajuju mmiri di ezigbo nkpa kemgbe ndi nna nna anyi gosiputara ya site na « Maat-Mata », ya bụ, site na nyocha, sayensi ketara kemgbe Ishango n'osimiri nke Ọdọ Mmiri Edward. Nke a bụ ebe mmadụ si na mmiri ma ọ bụ « ugbu a », nakwa na ahụ mmadụ mejupụtara isi.
Ya mere ejiri mmiri mee ka ahụ sie ike, ahụike na ahụike nke mmụọ, maka na ọ na -eche maka ezi omume nke ahụ mmadụ, nguzozi ya: otú ahụ na Maat.
Nke a bụ ihe kpatara ya Ngangu ya Ntima (ọgụgụ isi nke obi, Kikongo) ga-adị ọcha, nke ahụ dị mma, ka ọ bụrụ ìhè dị ka nku Maat na itule ime ihe nile; ebe echiche na-esite n’obi sitere n’obi, dịka esi kwuo na ọdịnala ochie anyị.
Ọkt20 01: 03